FIVORIAMBEN'NY VONINAHITRA ho an'ny Bulgaria | 100% RATE FAHOMBIAZANA | AZO ATAO | VISA GOLDEN ho an'i Bulgaria, toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola Bulgaria, toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola Bulgaria, toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola Bulgaria, fandaharana momba ny fampiasam-bola Bul
Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'ny Bulgaria sy Golden Visa
● Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Bulgaria amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny trano sy tany
Best Agents ho an'ny fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria ary Mpisolovava an'ny Ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria sy ny brokers ho an'ny trano sy trano fonenana fandaharana ao Bulgaria dia miasa miaraka amin'ny fiarovana ny mpanjifa.
Ny toeram-ponenan'ireo masoivohon'ny fampiasam-bola ho an'i Bulgaria dia manome serivisy ho an'ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria, ny fandaharam-ponenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola any Bulgaria, ny programa momba ny fampiantranoana any Bulgaria, ny toeram-ponenana faharoa amin'ny fampiasam-bola any Bulgaria, ny toeram-ponenana roa amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria, ny zom-pirenena ary ny fampiantranoana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria , Fonenana maharitra amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria, Resident vetivety amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria, Resident amin'ny alàlan'ny tetika fampiasam-bola any Bulgaria, Resadresaka amin'ny alàlan'ny teti-bola fampiasam-bola any Bulgaria, zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola ao Bulgaria, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola any Bulgaria, faharoa Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria, ny zom-pirenena roa amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria, ny toeram-ponenana ary ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria, ny fonenana ary ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria, ny fandaharan'asan'ny zom-pirenena momba ny zom-pirenena any Bulgaria, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny teti-bola any Bulgaria, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny tetika fampiasam-bola ao Bulgaria, faharoa pasipaoro ao Bulgaria, programa pasipaoro faharoa any Bulgaria, programa pasipaoro faharoa any Bulgaria, pasipaoro faharoa faharoa any Bulgaria, fonenana ary pasipaoro faharoa any Bulgaria, pasipaoro diplomatika faharoa any Bulgaria, pasipaoro faharoa ampiasain'ny fampiasam-bola any Bulgaria, pasipaoro fizarana faharoa ao Bulgaria, tetikady pasipaoro faharoa any Bulgaria, tetikady pasipaoro faharoa any Bulgaria, visa volamena any Bulgaria, visa volamena any Bulgaria, programa visa volamena any Bulgaria, programa visa volamena any Bulgaria, visa volamena faharoa any Bulgaria, programa visa volamena faharoa any Bulgaria, visa volamena roa ao Bulgaria, zom-pirenena ary visa volamena any Bulgaria, toeram-ponenana ary visa volamena any Bulgaria, zom-pirenena visa volamena ao Bulgaria, drafitra visa volamena any Bulgaria, drafitra visa volamena any Bulgaria.
"Vahaolana 1 fijanonana" ho an'ny Residence rehetra misy anao amin'ny fampiasam-bola any Bulgaria miaraka amin'ny fanampiana fanampiny.
Fampiasam-bola farafahakeliny any Bulgaria ho an'ny fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola: EUR 512,000
Fampidirana Bulgaria sy fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola
Bulgaria dia nisafidy britanika isan-karazany izay mila miverina an-tanindrazana na fikambanana miorina amin'ny Internet hiala ny tany noho ny fanazavana manokana fa ambany ny tahan'ny hetra alain'izy ireo. Ny fanazavana hafa ao ambadiky ny safidy nataon'ireto olona ireto dia ny vidin'ny mahazatra amin'ny entana fototra any Bulgaria.
Bulgaria no firenena manana trano fandraisam-bahiny antitra, trano fisakafoanana ary masinina an-trano mifanohitra amin'ny sisa amin'ny Vondrona Eropeana.
Ny fifindrana any amin'ny firenena lavitra dia matetika midika ho fanitsiana fomba fiaina hafa. Noho izany, raha mifindra any Bulgaria ianao, dia tsara ny mahafantatra momba ny fomba fiaina sy ny fitiavan'ny olona isan'andro. Hankalaza fankalazana mahazatra, ara-tsosialy ary henjana mihitsy aza ianao. Na izany aza, lasa izay, olona mavitrika manokana ihany koa izy ireo, variana amin'ny asany ary mahita fotoana mety tsara hanaovana fampihetseham-batana, ohatra, ny jono, fanatanjahan-tena amin'ny ririnina, asa sns.
Na dia deraina amin'ny daty mazava aza ny fankalazana vitsivitsy, ny hafa kosa mihodina manodidina ny Paska. Raha ny momba ny Noely dia deraina amin'ny fizarana roa, ny voalohany amin'ny 24 desambra maraina ary ny faharoa amin'ny 25 desambra ao am-piangonana arahin'ny sakafo atoandro mahafinaritra.
Ny azo antoka dia misy fomban-drazana vitsivitsy misy nefa mbola noheverina na dia teo aza ny fiforonan'i Bulgaria lasa firenena mandroso.
Ny ankamaroan'ny Bulgarians dia ampiasaina hankanesana any amoron-dranomasina sy hankafizany ny sakafo.
Ho an'ny olona marobe, ny fomba fiainana miaraka amin'ny fiainana any Bulgaria no mahasarika indrindra. Ny fitsangatsanganana amoron-dranomasina amin'ny faramparan'ny lohataona, ny fanaovana ski mandritra ny ririnina, ny filalaovana golf ary ny fivezivezena eny an-tendrombohitra dia fanazaran-tena mampiala voly izay azonao tsara. Ny seho midadasika any Bulgaria dia manome vintana vaovao marobe.
Ny ondry sy osy dia mivezivezy miharihary eny amin'ny tanimboly tsy misy rindrina, ary mponina marobe manodidina no mamokatra ny vokatra any an-trano. Na izany aza, na dia mahasarika aza ny fiainana any Bulgaria, dia misy toro-hevitra fiarovana tokony ho fantatra. Miasa any amin'ny faritra afovoan-tanàna sy toeram-pialan-tsasatra ny pickpockets, indrindra any amin'ny faritra feno olona toy ny fitaterana sy ny arabe. Ankoatr'izay dia nisy koa ny fanitarana ny halatra avy amin'ny trano fandraisam-bahiny amin'ny faritra be mpizahatany. Bulgaria dia miasa sehatr'asa ambaratonga izay ny tahan'ny fandaniam-bolan'ny olona sy ny orinasa amin'ny 2011 dia 10% amin'ny tranga rehetra. Ho an'izay manantena ny hampihena ny refin'ny adidy aloany amin'ny karamany na ny tombotsoan'ny orinasa amin'izany fomba izany, azo antoka fa manintona i Bulgaria!
Ny vidin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny trano fisakafoanana ao Bulgaria dia mazava eo ambanin'ny ampahany betsaka amin'ny mahazatra ho an'ny EU.
Ny vidin'ny fananan-tany any Bulgaria dia niondrana an-tampon'ny zava-bitan'izy ireo taorian'ny fampiroboroboana ny vondrona eropeana - midika izany fa azo vidiana ny harem-pirenena, (ankoatry ny faritra ambanivohitra vitsivitsy voafantina ao Sofia), izay kely dia kely noho izay aloanao any UK noho ny fahafaha-mitaha aminy. . Ny fampanofana any Bulgaria amin'ny ara-dalàna dia 74.06% ambany noho ny any Angletera.
Amin'ny ankapobeny ny ezaka kely indrindra amin'ny fiainana dia fisarihana lehibe. Ny olona misotro ronono dia mety hahita fa ny karamany isan-taona dia lasa lavitra any Bulgaria - ary afaka mahazo tombony amin'ny fivezivezena izy ireo satria tsy iharan'ny toe-karena eo akaiky eo hanomezana azy ireo fivelomana.
Antsipiriany fototra momba ny Resident by Investment for Bulgaria
Fampiasam-bola farafahakeliny ho an'ny Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria
Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Bulgaria
Fotoana fanodinana ho an'ny Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bolan'i Bulgaria
Safidy fampiasam-bola ho an'ny Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bolan'i Bulgaria
Maninona no mandeha amin'ny Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ao Bulgaria
Bulgaria dia mpikambana ao amin'ny Vondrona Eropeana ary ho lasa mpikambana ao amin'ny faritra Schengen amin'ny ho avy akaiky. Arak'izany ny firenena dia manolotra programa visa mahasarika. Ny zom-pirenena Bolgara dia afaka manome anao ny zotra hitety an'i Eropa tsy mila visa. Aorian'ny fotoana fanodinana 2 taona dia ho afaka mankafy ny tombony azo amin'ny maha-mponina maharitra any Bulgaria anao. Ny tombony dia misy ny hetra ambany, fidirana amin'ny tsenan'ny Vondrona eropeana sy ny maro hafa. Mba hahazoana olom-pirenena Bolgara dia tsy mila mahafantatra ilay fiteny ianao na manana trano sy tany. Aorian'ny fahazoana ny zom-pirenen'i Bulgaria dia afaka mivezivezy mora foana ianao ary miaina any amin'ireo firenena eropeana.
Ny tombotsoan'ny toeram-ponenana maharitra Bulgarian dia ampiharina amin'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana. Aorian'ny nahazoanao fonenana Bulgarianana ny vadinao sy ny zanakao dia afaka mahazo ny toeram-ponenan'i Bulgaria ihany koa mifototra amin'ny fanatambatra ny fianakaviana.
Fonenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola any Bulgaria insite
Nanjary trano maharitra hatramin'ny voalohany ianao hatramin'ny sivy volana. Mandritra io vanim-potoana io dia ilaina ny mitsidika an'i Bulgaria indroa sy ny Consulat Bulgarian ao amin'ny firenenao. Aorian'ny fanomanana ny fisie anao dia takiana aminao ny handefa ny vola fampiasam-bola BGN 1 tapitrisa (EUR 512,000). Rehefa navoaka ny taratasy fanamarinana ny fampiasam-bola azonao atao dia afaka mangataka karazana Visa D. Rehefa mahazo visa ianao dia mitsidika an'i Bulgaria ary mandefa ilay fangatahana. Amin'ny manaraka dia mitsidika ianao haka ny karatrao maharitra. Aorian'ny fahazoana ny karatra fonenanao maharitra dia afaka mahazo ny azy ny olona ao amin'ny fianakavianao amin'ny alàlan'ny fandefasana taratasy fangatahana. Ny mpangataka dia takiana ihany koa hitsidika an'i Bulgaria indroa.
Takiana aminao ny hametraka BGN 1 tapitrisa (appr. EUR 512,000) ao amin'ny Portfolio an'ny Governemanta mandritra ny 5 taona. Aorian'ny 5 taona dia haverinao ny volanao nefa tsy misy zanabola. Ny governemanta Bulgaria dia manome antoka fa hamerina ny volanao ianao aorian'ny faran'ny fotoana. Ny habetsaky ny fampiasam-bola dia azon'ny banky eropeana atao ara-bola. Ny saram-panodinana EUR 25,000 dia azo ampiharina. Ny frais fanampiny dia azo takiana amin'ireo ankizy izay tsy 18 taona. 2,500 EUR ny sarany ho an'ny ankizy.
Ny ekipan'i ponenana avy amin'ny Agents Investment for Bulgaria ary ponenana avy amin'ny Investment mpisolovava ho an'i Bulgaria manome mpanjifa sy ny fianakavian'izy ireo any Bulgaria fanampiana amin'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any Bulgaria, toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any Bulgaria sy ireo fahafaha-mifindra monina amin'ny fifindra-monina hafa, any amin'ny firenena 37.
Manome mora vidy izahay Fonenana amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i Bulgaria, amin'ny alàlan'ny takatry ny vidinay orinasan-dalàna momba ny fampiasam-bola sy ny fifindra-monina ho an'i Bulgaria, mpisolovava momba ny fifindra-monina mora vidy ho an'i Bulgaria, trano onenan'ireo mpanolotsaina fampiasam-bola ho an'i Bulgaria, trano onenan'ireo mpisolovava mpamatsy vola ho an'i Bulgaria ary orinasa mpanolotsaina fifindra-monina mora vidy ho an'i Bulgaria
Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any Bulgaria ka hatramin'ny firenena 37.
Fonenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola avy any Bulgaria.
Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ao Bulgaria amin'ny alàlan'ny trano sy tany
Manome fanohanana izahay amin'ny famatsiam-bola amin'ny fananan-tany any Bulgaria miaraka amin'ny fomba fijery fa tokony hahazo tombony tsara ny mpanjifa amin'ny famatsiam-bola any Bulgaria, isaky ny te-hiala amin'ny fampiasam-bola ataon'izy ireo ho an'ny fonenany amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Bulgaria izy ireo. Manana fifandraisana amina mpandrindra trano sy tany vitsivitsy faran'izay tsara eto Bulgaria izahay izay manana rakitsoratra tsara ary ny taniny dia any amin'ny toerana tsara any Bulgaria, mahazo valiny tsara indrindra.
Mila fantarina - fonenana Bulgaria amin'ny fampiasam-bola
Ny toeram-ponenan'i Lawyer Investment ho an'ny Bulgaria dia hanome fanampiana amin'ny antontan-taratasy amin'ny antsipirihany momba ny Toeram-ponenanao mahomby amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria. Ny serivisy mahazatra momba ny Resident by Investment to Bulgaria dia misy:
Miorina amin'ny fahazotoana voalohany izahay, mba hanomanana tatitra alohan'ny hanolorana ny Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Bulgaria amin'ireo mpanjifa hahazoana fahazoan-dàlana hipetraka ao Bulgaria ary hampihenana ny mety ho fandavana.
Mba hahafahantsika miroso amin'ny Residence amin'ny alàlan'ny fangatahana fampiasam-bola ho an'i Bulgaria dia mila kopian'ny pasipaoro amn'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana izahay.
Fandikana sy fanodinana taratasy momba ny Residence amin'ny alàlan'ny fangatahana fampiasam-bola ho an'i Bulgaria. Ireo mpisolovava manokanay momba ny Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Bulgaria sy ny visa volamena dia hanampy amin'ny famenoana endrika sy antontan-taratasy.
Raha vantany vao vonona ny antontan-taratasinao sy ny fianakavianao momba ny Resident amin'ny alàlan'ny fangatahana fampiasam-bola ho an'i Bulgaria, dia hofenoinay tompon'andraikitra voadinika ao Bulgaria izany.
Raha vantany vao nankatoavina ny fangatahana hividianana trano amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria, dia mizara ny vaovao tsara aminao izahay ary manomboka miomana amin'ny fanohanana hafa.
Izahay dia tsy manohana na manome Residence amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola any Bulgaria amin'ireo olona voalaza etsy ambany na orinasa any Bulgaria:
ponenana amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i Bulgaria dia tsy atolotra ho an'ny Mpivarotra na mpaninjara fitaovam-piadiana sy bala na avy any Bulgaria.
ponenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola ho an'i Bulgaria dia tsy atolotra amin'ny fanaraha-maso ara-teknika any Bulgaria na fitsikilovana indostrialy ny programa fampiasam-bola ao na avy na mankany Bulgaria.
ponenana amin'ny alàlan'ny fakan-kevitra momba ny fampiasam-bola ho an'i Bulgaria dia tsy atolotra ho an'ny hetsika tsy ara-dalàna na heloka bevava any Bulgaria.
ponenana amin'ny alàlan'ny fanampiana ara-bola ho an'i Bulgaria dia tsy natao ho an'ny olona mifandraika amin'ny Genetic material any Bulgaria.
ponenana amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i Bulgaria Tsy natao ho an'ireo orinasa miady amin'ny fitaovam-piadiana biolojika na nokleary mampidi-doza na mampidi-doza any Bulgaria.
ponenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola Ny fanohanana an'i Bulgaria dia tsy misy ho an'ny olona Bulgaria mifandraika amin'ny varotra, fitehirizana any Bulgaria, na fitaterana taova olombelona.
ponenana amin'ny fampiasam-bola ho an'i Bulgaria dia tsy natao ho an'ny maso ivoho tsy ara-dalàna.
ponenana serivisy fandaharana ho an'i Bulgaria dia tsy natao ho an'ny antokom-pinoana sy ny fikambanana mpanao asa soa any Bulgaria.
ponenana amin'ny serivisy fampiasam-bola ao Bolgaria dia tsy omena ny olona manao sary vetaveta any Bulgaria.
Ny fonenanay mpisolovava any Bulgaria Aza manohana ny fandraharahana mivarotra rongony amin'ny zava-mahadomelina any Bulgaria.
“Fanamarihana lehibe : Ny MM Solutions INC dia mitaky fitandremana araka ny antonony mba hametrahana mialoha ireo antontan-taratasy AML ho an'ny mpanjifa ho an'i Bulgaria sy ny KYC saingy tsy ekenay izay tompon'andraikitra amin'ny fanilihana avy amin'ny manampahefana ao Bulgaria ho fankatoavana ny fangatahana. ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria.
Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria sy any amin'ny firenena hafa, miampy fanampiana maro hafa.
Manome fonenana tsara indrindra izahay amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny fampiasam-bola any Bulgaria ho an'ny fampiasam-bola, ny fifindra-monina ary ny drafitra trano sy tany any Bulgaria.
Manohana ny Resident international amin'ny traikefa fampiasam-bola sy ny takian'ny lalàna Bulgaria, manamboatra vahaolana tsara indrindra izahay.
Ny toeram-ponenanay amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i Bulgaria dia manome ny vidiny mora indrindra, miaraka amin'ny taham-pahombiazana azo trandrahana tsara indrindra ho an'i Bulgaria.
Izahay dia naka traikefa an-taonany maro momba ny trano roa ho an'ny Bulgaria manohana ny mpanjifa sy ny fianakavian'izy ireo ho any Bulgaria.
Fonenana efa za-draharaha avy amin'ireo mpisolovava mpamatsy vola ho an'i Bulgaria sy ireo mpiasan'ny lalàna ho an'i Bulgaria izay manome fanohanana ny mpanjifa.
Alohan'ny hipetrahanao any Bulgaria ary aorian'ny fankatoavana, ny mpikambana ao amin'ny ekipa zokinay dia ho eo eo amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha na fanampiana manokana an'i Bulgaria
Manana traikefa iraisampirenena amin'ny Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola izahay, anisan'izany i Bulgaria, manampy ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao amin'ny serivisy tsara indrindra.
Raha sanatria, tsy nahomby ny toeram-ponenanao amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria, misy firenena 36 izay mbola arosonay, vonona ny hanana drafitra B.
Manisa kajy amin'ny trano honenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Bulgaria
Mba hikajiana ny vidin'ny trano honenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Bulgaria dia fenoy ny antsipiriany rehetra ao anatin'izany ny olona ao amin'ny fianakaviana sy ny taonany. Noho ny mpanjifa marobe ho an'i Bulgaria, afaka manome serivisy tsara kokoa izahay amin'ny vidiny mirary. Ny kajy dia misy, ny vidiny ho an'ny trano honenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola ho an'i Bulgaria sy ny fiampangana hafa.
Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria sy serivisy hafa
Ankoatry ny Resident amin'ny alàlan'ny consultation fampiasam-bola ho an'i Bulgaria, dia manome serivisy, serivisy IT sy HR ihany koa izahay any Bulgaria, izay tsy hitanao ambanin'ny elo iray nomen'ny mpanolo-tsaina hafa ho an'i Bulgaria izay nahatonga anay fivarotana tokana ho an'i Bulgaria sy firenena 106.
Manohana ny lalan'ny mpanjifanay mihoatra ny trano fonenana izahay amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Bulgaria amin'ny alàlan'ny fanampian'ny mpisolovava anay, mpanolo-tsaina anay ary mpamatsy vola any Bulgaria sy iraisam-pirenena.
Aorian'ny Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho Bulgaria raha mikasa ny manomboka orinasa amin'ny fividianana orinasa misy any Bulgaria ho an'ny fanombohana eo noho eo any Bulgaria.
Aorian'ny Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria, manangana orinasa ao Bolgaria.
Mpisolovava ho an'ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria
Izahay dia manome vahaolana ara-dalàna amin'ny alàlan'ny vahaolana momba ny Fampiasam-bola ho an'i Bulgaria ary ny fahombiazan'ny mpanjifanay dia tena zava-dehibe, ho an'i Bulgaria, mpitarika izahay, ny orinasanay ho an'ny Bulgaria dia manana mpiasan'ny fifindra-monina tsara indrindra any Bulgaria ihany koa, manana ny lazany izahay amin'ny fanomezana traikefa mpanjifa tsara indrindra ho an'i Bulgaria. vahaolana mazava momba ny famatsiam-bola ho an'ny olona Bulgaria sy ny fianakaviany. Ny toeram-ponenanay sy ny ekipan'ny fampiasam-bola ho an'i Bulgaria dia manome vahaolana namboarina ho fahombiazan'ny mpanjifa.
Ny fahefan'ny mpisolovava an'i Bulgaria dia takiana amin'ny hetsika ara-dalàna ho anao amin'ny alàlan'ny Resident avy amin'ny mpisolovava mpamatsy vola any Bulgaria. Raha any Bulgaria ianao na mikasa ny hitsidika an'i Bulgaria, azonay atao ny mahazo etoana ny fahefanao mpisolovava.
Fanontaniana napetraka matetika - Fonenan'ny fampiasam-bola any Bulgaria
Inona ny fampiasam-bola farafahakeliny ho an'ny Resident amin'ny fampiasam-bola any Bulgaria?
Fampiasam-bola farafahakeliny ho an'ny Resident amin'ny fampiasam-bola any Bulgaria dia EUR 512,000.
Manome fanampiana ara-dalàna an'i Bulgaria ho an'ny Resident amin'ny fampiasam-bola ve ianao?
Eny, ny mpisolovava anay any Bulgaria sy ireo solontenanay ao Bulgaria dia manome fanohanana ny Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria.
Vola lafo ve ny trano honenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Bulgaria?
Ny vidin'ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Bulgaria ary ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny vola ilaina amin'ny famatsiam-bola ho an'i Bulgaria dia ho an'ny olona manankarena avo lenta, ny saram-pakan-kevitra momba ny Resident by Investment to Bulgaria ihany koa no omenay, ary manohana maro hafa koa izahay ho an'ny Residence amin'ny vahaolana Investment.
Iza ny mponina afaka mangataka Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria na visa ho an'ny mpampiasa any Bulgaria?
Ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola dia azo ampiasain'ny olom-pirenena amin'ny firenena rehetra saingy ohatra vitsy ny Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Bulgaria avy any Azia, ny trano fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Bulgaria avy any Afrika, ny trano fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Bulgaria avy any Eropa, ny trano fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Bulgaria avy any Amerika atsimo, Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Bulgaria avy any Malezia, Resident amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria avy any Bangladesh, Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria avy any Indonezia, Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Bulgaria avy any Sri Lanka, Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Bulgaria avy any Nepal, Residence amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Bulgaria avy any India sy Residence tamin'ny fampiasam-bola ho an'i Bulgaria avy any UAE.
Fonenana matihanina amin'ny alàlan'ny fitarihana fitarihana ho an'i Bulgaria
Mangataha consultation maimaimpoana ho an'ny toeram-ponenanao amin'ny Investment to Bulgaria
Fepetra manan-danja amin'ny Residence amin'ny Investment for Bulgaria